Endri-tsoratra maimaim-poana amin'ny volana septambra | Famoronana an-tserasera
Jorge Neira | | loharanom-baovao
Isaky ny ora mandalo dia miseho izy ireo maherin'ny 19.280 arivo endrika Amin'ny sehatra manerantany, noho izany dia betsaka ny asa tokony hatao, ilaina ity sehatra ity mba hanana endritsoratra vaovao sy isan-karazany ary amin'ny farany, ny typografia dia hita fa manana lanjany lehibe ao anatin'ny karazana tetikasa rehetra, ary dia zavatra tsy azo lavina.
1 Ahoana no ahafahan'ny endri-tsoratra tsara manampy ny tetikasa?
2 Fonosary maimaimpoana volana septambra
2.3 Nilamina ny fihavanana
2.4 Loharano maimaim-poana Playlist
2.5 lavarangana fidirana
Ahoana no ahafahan'ny endri-tsoratra tsara manampy ny tetikasa?
Mahagaga fa toy ny endri-tsoratra na zavatra tsotra spacing spacing, dia afaka miantraika mivantana amin'ny fahatsapan'ny mpamaky momba ny endrika iray na hafa.
Ny fisafidianana ny endritsoratra mety dia mazàna dia mampisy fahasamihafana eo amin'ny famakiana na tsia ataon'ny mpamaky fotoana hamakiana atiny sasantsasany, midika izany azonao atao ny manamora ny zava-drehetra amin'ny fisafidianana izay mety indrindra sy mety indrindra amin'ny volavolanao.
Noho io antony io sy amin'ity lahatsoratra ity dia tianay haseho anao ireo loharano izay hahafaly ny karazana mpamaky rehetra, noho izany dia tsy tokony hanjavona ao amin'ny tranombokinao izy ireo.
Hasehonay anao ny endritsoratra vaovao, izay manana firafitra tsara ary tena ilaina izy ireo hanamorana ny tetikasanao manaraka. Aza adino ny manamarina ny fahazoan-dàlana aminao, satria izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra na ho an'ny tena manokana.
Fonosary maimaimpoana volana septambra
Izy io dia endri-tsoratra maimaim-poana izay manana miolakolaka mahazatra, noho izany dia mety amin'ny lohateny ary koa amin'ny famolavolana logo. Izy io koa dia manana karazana lanjany roa, sahy sy maivana.
Loharano iray io tena malalaka izay azo ampiasaina na ampiasaina manokana na ara-barotra.
Nilamina ny fihavanana
Loharano tsara izy io hampivelarana tetikasa miaraka a typografika somary tsotra sy milamina kokoa. Azo ampiasaina amin'ny fomba rehetra izy io, afaka maimaim-poana koa izy io.
Loharano maimaim-poana Playlist
Izy io dia misy endri-tsoratra vita tanana izay lamaody borosy maina. Izy io dia manana fomba telo, Ornament, Script, ary Caps, izay azo atambatra mba hamoronana endrika tsara sy lavorary. Io dia mety ho ampiasao ity endritsoratra ity amin'ny karazan-tanjona rehetra, na inona na inona manokana na ara-barotra, ankoatry ny mety ho an'ny karatra firariana, fanasana amin'ny mariazy, volavola amin'ny T-shirt, ankoatry ny hafa.
Ity endritsoratra ity dia manana dikanteny hafa; Ilay eo amin'ny môdely dia mety ho an'ny peta-drindrina sy ny zavatra misy lohahevitra ratsy.
Izany dia endri-tsoratra geometrika izay mifototra amin'ny tsipika, ity ilay valiny mitovy ampiasaina amin'ny famolavolana ny glyphs, "M" sy "W". Hita fa tena mety amin'ny lohateny sy afisy ary koa ny logo, maimaim-poana koa izy io ary manana fahazoan-dàlana hampiasaina ara-barotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Endritsoratra maimaim-poana amin'ny volana septambra
Nataly Castaneda dia hoy izy:
Mamaly an'i Nataly Castañeda
fiorela dia hoy izy:
loharano tena tsara, misaotra amin'ny vaovao
Mamaly an'i fiorela
Marta Santidrian dia hoy izy:
Te-misintona endritsoratra avy amin'ity pejy ity aho ary tsy fantatro ny fomba hanaovana azy
Valiny tamin'i Marta Santidrian